Xabsiyada Gobaladda Waqooyi oo maanta laga sii deynayo 365-ruux.
Madaxweynaha Gobaladda Waqooyi Muuse Biixi Cabdi ayaa cafis u fidiyay maxaabiis gaareysa 365-ruux oo u xiran dambiyo fud-fud, sababta waxa uu ku sheegay in munaasabadda 18-ka May oo ay shalay u dabaaldeggeen 30-sano guuradii kasoo wareegtay markii maamulkaas uu ku dhawaaqay gooni isu taag, balse aan helin aqoonsi.
Warqad xalay uu soo saaray Muuse Biixi waxa uu amray guddiga u xilsaaran sii deynta Maxaabiista la deynayo, maadaama lagu kala xulayo dambiyada ay galeen iyo sida ay u kala fudud yihiin.
Guddiga ayaa maanta tagaya Xabsiyada si ay ula wareegaan liisaska Magacyada Maxaabiista iyo dambiyada ay ku xiran yihiin lagu qoray si howsha sii deynta ah ee loo xilsaaray isla maantaba ay u guda galaan.
Xabsiyada dadka ugu badan ay ku jiraan waxa ay ku yaalla Magaalada Hargeysa oo ah Xarunta Gobaladda Waqooyi, waxa ay u kala xiran yihiin dambiyo kala duwan oo qaarkood lagu soo qabtay, loona gudbiyay xabsiyada.
Waxa uu tilmaamay in aysan Cafiska saamayn ku lahayn xuquuqda madaniga ah iyo raadka ciqaabeedta ee ka dhalanaysa dembiyadda ay ku xukunnaayeen, waxaana uu soo qaatay qodobka 92 ee Xeerka Ciqaabta Guud, in Cafiska uu fulinayo Xafiiska Xeer Ilaaliyaha Guud.
Hogamiye Musue Biixi ayaa markii Soomaaliya laga helay kiisaskii ugu horeeyay Cudurka Coronavirus Cafis kusii daayay in ka badan 800-maxbuus oo u xiran dambiyo kala duwan, kuwaas oo lasii daayay muddo kadib.
Magaalada Hargeysa waxaa ku xiran Maxaabiis uu kamid yahay Cabdimaalik Muuse Coldoon, waxaana dhawaan Hogamiye Biixi lagu eedeeyay in uu ka reebay dadkii uu cafiyay, inkasta oo aan la hubin in uu qayb ka noqonayo 365-ta Maxbuus ee lasii daynayo iyo in kale.